Sirdhaad dabiici ah Buuraha Weyn, Jizera Mountains, Jannada Bohemian
sirdoonka macmal (UI, anglicky sirdoonka macmal, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu "chování inteligentní" je duugowday předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon inteligence užívá lidský rozum. S tímto pojmem poprvé přišel John McCarthy 1955 v roce.
Hantida dabiiciga ah ayaa dejisay hadafka ah qaabeynta waxqabad bini aadaminimo oo loo tixgelinayo caqli ahaan marka qaabku yahay barnaamij kombuyuutar, dunida saxda ah. Waxqabadka bini'aadamka ee casriga ah waa badeecada hababka nafsiga ah, sida geedi socodka dunida dhabta ah. Waxa ay yihiin qaabka, hal dhinac, oo muujinaya muuqaalka dibadda ee hawlaha caqliga dadka, nooca maskaxda aadanaha, oo weli ku xaddidan shabakadaha neerfaha. Aynu xusno in aduunka saxda ah lagu qeexay hab sidaas u ah dhamaantiisaba si gebi ahaanba loo qeexay (ie eber gudaha sidaas darteed qof kasta ogyahay waxay si fiican u garanayaan waxa ay ula jeedaan, gabi ahaanba shaki la'aan. Sidaa darted, xaqnimadooda waxay ku dhex jirtaa isku dheelitirka saxda ah ee fekerka aadanaha oo leh macnaheeda. Aqoonyahan dabiici ah ayaa tusaale u ah dhacdooyinka dunida dhabta ah, laakiin sidoo kale astaamaha dunida saxda ah. Waa maxay qalabyada aad leedahay iyo maxay yihiin fursadaha iyo xuduudaha aduunka dhabta ah?
Muujinaya aduunka saxda ah aduunka saxda ah
Waxaan ku meelaynaynaa saxda saxda ah: xisaabta, sayniska dhabta ah, ciyaaraha saxda ah, mashiinnada saxda ah (Mashiinka Turing). Hawlaha lagu xalliyo sirdoonka farsamada ee aaggan waa (tusaalooyinka iyo nidaamka ku habboon): kala-soocida asaasiga, robotics garashada, ciyaarta chess, algorithms caqli leh. Tan iyo markii, xaaladdan, xuduudaha dunidan saxda ah ma dhaafaan, ma jiraan wax xadgudub ah oo ka dhan ah saxnimada wareejinta adduunyo kale. Isticmaalka natiijooyinka sayniska dhabta ah (xogta iyo aqoonta) ee sirta farsameed, waxay horeyba u saxday suugaanta dhabta ah - u guurista adduun sax ah.
Sida loo helo dunida dhabta ah ee dunida dhabta ah
buundada kaliya ee u dhaxeeya dunida dhabta ah iyo saxda ah aalad in aynu u qayshanno qiimaha. Waa qayb ka mid ah dunida waa saxda ah, tan iyo markii ay si hufan waa halbeegyada tayada (sida kor lagu sharaxay) iyo waa aasaaska, daliilka la cabbiri karo ee dunida dhabta ah, ama baaritaan u galay. The luqadda suuragal ah keliya saxda ah ee dunida waa af macmal ah oo rasmi ah (xisaabta, macquulka ah ee rasmiga ah, luqadaha barnaamijyadooda), kuwaas oo raacsan saxda ah in dunida la siiyo fasiraad saxda ah (ie la eber Xaashi hordhigay gudaha) ee ay qaab-dhismeedka luqadaha iyo hawlaha iyaga u taliya. Variables oggolaadaan in aad si ay u sahamiyaan dunida dhabta ah, si ay aqoonta helay qeyb ka mid ah dunida iyo luqadda rasmiga ah macmal saxda ogolaanaya aqoonta this u qoro (si ay u matalaan) xidhiidh (model aqoonsan sharciyada dunida dhabta ah) u dhexeeya doorsoomayaasha. Waa sax aqoon macmal ah ee dunida dhabta ah, marka qayb ka mid ah la siiyay dunida dhabta ah (Newton ee) wakiil dooro doorsoomayaal ah iyo xiriiro xisaabeed oo lagu qeexay iyaga dhexdooda. Qodobbada isbeddelka la doortay ayaa la sameeyay caqli badan falsafadda aqoonta adduunka dhabta ah. Tiro iyo qalabka afka rasmiga ah macmal ah, inkastoo sayniska sax ah, laakiin qalabka oo keliya at its qubo iyo sirdoonka macmal, waa in la sameeyay qayb ka mid ah model saxda ah ee dunida, waa in arki iyo eedeysanuhu on computer ah. Taas waxaa raacda in aqoonta loo isticmaalo habka sirdoonka macmal ah waa in la helaa by sayniska saxda ah, in uu yahay, sida xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha ku matalo luqadda rasmiga ah (xisaabta, macquulka ah ee rasmiga ah, Barnaamijka luqadaha) tusaale ahaan. In nidaamka khabiir.
Waa lagama maarmaan in la yeesho aragtiyo qotodheer u ah wadooyinka sirta farsamada oo ay hoggaamiyaan hawlaha shabakadaha neerfayaasha. Hadafka weyn ayaa la gelinayaa, laakiin waa lagama maarmaan in la go'aamiyo inta ay le'eg tahay qaabkani wuxuu keeni karaa maskaxda dhabta ah ee maskaxda. Aqoonta bani-aadmiga waxay u adeegsanaysaa aqoonta sida filter dheelitirnaanta iyo processing xiga ee macluumaadkan waa vnitropsychickou (gudaha) caddayn kala sooc lahayn la socday, waxa ay inta badan shakhsi ahaan iyo dareen. Kuwani waa mabaadii'da laga fogeynayo mabaa'diida aduunka aduunku saxda u siin karo. Laga soo bilaabo kor ku xusan, waxaynu og nahay in dunidu waa inay isticmaalaan filter saxda ah sida aqoon (halkii Xaashi hordhigay) filter Discrete ka kooban set oo ah qiimaha doortay doorka wakiilada xaqiiqada dhabta ah. dib u eegista Horaantii tilmaamay in model ah network neural noqon doonaa ku filan oo ay si sax ah u qaabeeyaan maskaxda aadanaha dhab ah in ay ka gudbaan dhibaatada kakanaanta weyn ee maskaxda aadanaha, tusaale ahaan ku salaysan faham qoto dheer ee dhismayaasha kuwan, waxaa jiri doona in description adag. opinion Tan waxay ka timaaddaa Qaabaynta aragnimo tusaale. u ah hababka jirka, taas oo kordhinaysa tirada doorsoomayaasha iyo xiriirka u dhaxeeya, sida caadiga ah waxay kordhisaa saxnaanta waafaqsan model la xaqiiqada dhabta ah. Nidaamka maskaxda ee gudaha waxaa lagu qaabeeyey qaababka qaab dhismeedka maskaxda dadka, tani ma aha kiiska. Halkan waxaa ku qoran hababka final gobolka model abuurayo, processing macluumaadka xaladii vnitropsychickou caddayn, shakhsiyadda iyo dareen, ka baaraandega guryaha waa in ka baxsan dunida sayniska. Aynu xusno in aan loo eegin sida ay u adag tahay dhismayaasha maskaxda, ayaa weli laga helaa aduunka saxda ah iyo hababka ay ku qeexayso (sidoo kale), oo aan ka tagi Karin. In si kale loo dhigo, kasta oo ku kordha tirada doorsoomayaasha iyo xiriirka u dhaxeeya isticmaalaa in lagu tilmaamo dhismeedka of maskaxda aadanaha ma u Dhawaanina description (model) maskaxda dhab ka baaraandega macluumaad ku salaysan vnitropsychické hordhigay Baarlamaanka soo jireenka ah, subjectivity iyo caadifinimadu. Waa wax aan macquul aheyn boodi ka saxda ah dunida dhabta ah la hordhigay Baarlamaanka ee soo jireenka ah. Waxaad odhan kartaa waxa si kastaba, geedi socodka vnitropsychické in muuqo xidhan vnitropsychickou (gudaha) caddayn, aan aad u qaabeeyaan kartaa dunida dhabta ah gudaha of caddayn u reebay. geeddi socodka Vnitropsychické ay link soo jireenka ah si ay u hordhigay Baarlamaanka ku kala duwan yihiin vnitropsychickou ka dhan geeddi socodka loo yaqaan ee ka dhacaya dunida tusaale dhab ah. Physics, kimistari, iyo wixii la mid ah. In si kale loo dhigo, hawlgaladaa aan Tumeeya by sayniska saxda ah, in aan la qaadan si ay u qaabeeyaan dunida. dunida Sayniska kiiskan waa mid aad u tabar daran, sababtoo ah looga baahan yahay ee kor ku xusan ay exactitude waa mid aad u adag oo ka mabaadi'da dunida dhabta ah iska guuro halkaas oo geeddi-socodka taagan hordhigay Baarlamaanka vnitropsychické soo jireenka ah. Waxaa jira xad macquul ah ee cilmiga saxda ah, oo ay ku jiraan xisaabta iyo saxda ah mashiinka-computer. Sida search for habab cusub oo sababta waxaa jiray isku dayo in la isticmaalo dhismayaasha maskaxda ku nool tusaale ahaan. Rats, halkii lagu daydo computer ka mid ah shabakadaha neural xiran iyada oo interface ku haboon ee aan dabiici ahayn nidaamka (computer) falanqeeyo macluumaadka, qayb ka mid ah aalado garashada.
dunida Sayniska, oo waa aalad ugu awoodda badan oo lagama maarmaan ah cilmiga sayniska, ayaa dildilaaca gudaha ma aha oo kaliya lagu tilmaamay weedhaha Gödelovými la isticmaalayo (ma aha oo gebi ahaanba sax ah) processing yeelista xogta helay ee dunida dhabta ah ee abuuraya mala isaga ku saabsan, laakiin xadka sare ee mamnuucidda on Xaashi hordhigay gudaha. filter Discrete aqoonta (oo sidaas dunida dhabta ah) aad buu u yaraynaysaa aagga of aqoonta. Filter hordhigay Baarlamaanka u ogolaanaya qeexin ogaan filter badan Discrete kuu ogolaanaysaa inaad si sax ah u ogaadaan yar, halkii, kaliya ay qeyb ka yar ee dunida dhabta ah.
Next article Intel Meltdown iyo Specter & Nadaafadda Intel